Banyere Anyị - Ningbo Shenhe Iburu Co., Ltd
Ningbo SHENHE agba CO., LTD, tọrọ ntọala na 1995, emi odude ke Ningbo City, nke bụ n'ebe ndịda mben Hangzhou Bay Sea-agafe Bridge. SHB bụ ọkachamara emeputa nke miniature na obere nkenke miri uzo bọl agba, onwe-kwado bọl agba, anọ na-ebe kọntaktị bọl agba na-abụghị ọkọlọtọ bọl amị.
Mgbe otu ebe mmepe nke afọ 23, SHB nwere ndị factory ebe 40000 square mita na ibu egweri mmepụta akara na nzukọ akpaka mmepụta akara, nakwa dị ka ndị ọzọ elu nhazi na ule ngwá ọrụ nke karịrị 200 nkeji, nke constitude a zuru ezu n'ihe, analysis na ule usoro. The mmepụta ike bụ ike mmepụta 50 nde tent nke miniature na obere bọl biarin. Anyị na ngwaahịa nwere ike etinyere ụgbọala, ọgba tum tum engine, eletriki ngwa na elu-ọkwa electric ngwá ọrụ. Ke adianade do, ụgbọala amị mmepụta arụ a pụrụ iche ebe, akpan-kenyere onye na mmepụta akara. The ngwaahịa nwere a mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà nke ogologo ndụ, elu na-agba, na n'elu ibu, na-emeri na ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Shenhe agba ekpuchi anụ ụlọ ahịa na ahịa nke USA, Europe, Japan, Taiwan, n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara.
The ụlọ ọrụ ike na-emejuputa atumatu nke oge a na management Ọdịdị, tinyere integral management usoro, 5S ubi management usoro, na Kanban omenala, ịchịkwa na mmepụta nke akpakanamde amị na ISO / TS 16949: 2009 quality management usoro, na ndị na-abụghị akpakanamde amị na ISO9001: 2008 quality management usoro